होम अप्लायन्ससम्बन्धी सामग्रीको बजार माग, विक्री, सामान छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, कोभिडपछिको बदलिँदो अवस्था, डिजिटलाइजेसनलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका लागि लक्की ग्रुपअन्तर्गतको गायत्री एन्ड सन्सका सह–महाप्रबन्धक किरण बस्नेतसँग घर संसारका लागि अभियान दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय होम अप्लायन्सको बजार कस्तो छ ?
होम अप्लायन्सअन्तर्गत सानाठूला दुवै प्रकारका सामग्री हामीसँग छन् । ठूला सामग्रीअन्तर्गत फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रोफोन, एसीदेखि सानामा राइस कुकर, मिक्सर, हटपटलगायत सामान छन् । निषेधाज्ञाका बेला ठूला सामानको विक्री घटे पनि माग औसतमा ठीकै रह्यो । समस्या परे पनि दैनिक आवश्यकताअन्तर्गतका सामान भएकाले यस्ता सामग्रीको माग राम्रो रह्यो । होटल, पर्यटन, उद्योग, कार्यालय आदिमा बढी किनिने एसीलगायत सामग्रीको माग नभए पनि घरायसी प्रयोजनमा आउने सामग्रीको माग उच्च छ । माग पहिलेभन्दा अहिले बढेकै छ ।
अहिले विशेषतः कुन रेन्जका सामानको माग बढी छ ?
कोभिडपछि ठूला र महँगा सामानको माग सामान्य घटे पनि औसतमा विक्री घटेको छैन । घरायसी प्रयोगमा आउने साना सामानको बजार उस्तै छ । पहिले महँगा सामान माग हुने गरेकामा अहिले मध्यम र कम मूल्यका सामानको माग उच्च छ ।
डुप्लिकेट सामानको बजार पनि उत्तिकै देखिएकाले होम अप्लायन्सका सामान खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको पाइन्छ । सामान छनोट गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ?
स्थापित ब्रान्डले नै बजार लिने भन्ने चलन छ । यस्ता वस्तु महँगो पर्ने, वारेन्टी र ग्यारेन्टी कार्ड पनि हुने भएकाले यसमा खासै त्यति समस्या देखिन्न । अर्को, मध्यम मूल्यसम्मका गुणस्तरीय वस्तु भए हुन्छ, ब्रान्डको नामसँग मतलव छैन भन्ने ग्राहक पनि हुन्छन् । बजेट अभावका कारण बिग्रियो भने सहज पार्टस् पाउने, सर्भिर्सिङको राम्रो सेवा भएका सामग्री खोज्नेहरू हुन्छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सबैभन्दा बढी यस्तै मध्यम मूल्य स्तरका सामानको माग रहेको देखिन्छ । यस्ता ब्रान्डको विक्रीपछिको सेवा, मोडल, डिजाइन, रंग आदि हेरिने गरेकामा विशेषगरी विक्रीपछिको सेवालाई नै प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरीय वस्तु खरिद गर्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय कुन–कुन सामग्रीको माग बढेको छ ?
हामीसँग चार वटा ब्रान्ड छन् । पहिलो, लाइफर हो, जसअन्तर्गत ठूलादेखि सानासम्मका आइरन, मिक्स्चर, राइस कुकरदेखि लिएर ठूलोमा वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुमलगायत सामान छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि पूर्ण समाधान यसअन्तर्गत छ । यसैगरी चिनियाँ चुलान ब्रान्डको एसी, भारतीय पोलार, हिन्दवेयर गरी चार वटा विद्युतीय ब्रान्ड हामीसँग छन् । अहिले बजारमा वासिङ मेसिनको माग राम्रो छ । केही वर्षयता टिभी र फ्रिजको माग प्रायः घरबाट आउने गरेकामा अहिले वासिङ मेसिनको माग सोही हिसाबले बढेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि केही समय विद्युतीय चुल्होको माग थिएन । तर, अहिले विद्युतीय चुल्होको माग उच्च छ । मौसमअनुसार आवश्यक सामग्री विक्री हुँदै आएकामा अहिले गर्मीमा पनि तातोपानी राख्ने थर्मस, भाँडालगायत सामग्रीको माग छ । कर्पोरेट बजारका लागि माग नभए पनि घरायसीमा कमी आएको छैन ।
कोभिडका कारण अहिले बजारको परिभाषा पनि बदलिँदै गएको छ । डिजिटल प्रणालीमा जाने तयारी छैन ?
अब ग्राहक पसलमा आउने होइन, पसल ग्राहकको घर–घरमै जाने हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । अहिले बढिरहेको अनलाइन कारोबार पनि यसैको उदाहरण हो । गत वर्षयता यस्ता सामानको सोधपुछ अनलाइनमार्फतै हुने चलन बढ्दो छ । त्यसकारण बजारलाई डिजिटल प्रणालीमा विकास गर्नैपर्छ । विकल्प धेरै छन् । पसलमै आएर हेर्नुपर्ने, सामान छान्नुपर्ने भन्ने छैन । हामीले अनलाइन पेजमै हाम्रा सामग्रीका सबै जानकारी राख्ने गरेका छौं । मागअनुसार ग्राहकको विक्रीपछिको सेवालगायत विविध पक्षलाई प्राथमिकतामा राखी हामीसँग जोडिएका डिलर बिक्रेतामार्फत होम डेलिभरी सेवा दिइरहेका छौं । यसले विक्रीपछिको सेवा ग्राहकले सहजै पाएपछि रेस्पोन्स राम्रो आएको छ । अहिले सोझै कम्पनीबाट भन्दा लोकेसन हेरेर हामीसँग जोडिएका डिलरबाट ग्राहकलाई अनलाइन डेलिभरी सेवा दिइरहेका छौं ।
अहिले कुन–कुन ठाउँबाट सेवा दिइरहनुभएको छ । आगामी योजना के–के छन् ?
अहिले देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्लाका मुख्य–मुख्य सहरमा हामीले सेवा दिइरहेका छौं । भारतीय नाकापारिसम्म हाम्रा सामानको माग छ । कम्पनी स्थापनाको तेस्रो वर्ष चलिरहेकै बेला सबै जिल्लाका मुख्य सहरबाट सेवा दिने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि विक्रीपछिको सेवा चुस्त बनाउन पूर्वाधार तयार गरेर सोहीअनुसार देशभर सबै ठाउँमा सेवा विस्तारको योजना बनाएका छौँ ।
भर्चुअल एक्स्पो बजार खोजीको उपयुक्त अवसर[२०७८ भदौ, ८]